Asked by gregverrall1 1 isonto elidlule
I need to turn off my Delete cookies and site data when Firefox is closed setting.I have wrongly turn on this setting i need to turn off this setting.please help me to ch… (funda kabanzi)
Asked by Sridhar 6 ezinsukwini ezidlule
Asked by hvoorhis 4 ezinsukwini ezidlule
Asked by Rothachana2304 9 amahora adlule
Steps to posting a question using the new Ask A Question flow.
Asked by FF2019 1 unyaka odlule
Answered by user2523531 1 unyaka odlule
I did an update to Mozilla 76.0.1 and it included Pocket. I am not sure why now but everytime I log off and back on again I have to log into everything using my passwor… (funda kabanzi)
Asked by deannbennett2732 1 unyaka odlule
Asked by bees1 1 unyaka odlule
Asked by nishantsinghtez122 1 unyaka odlule
Asked by schnrl 1 unyaka odlule
I know there a quite a few os this same question, but they're old and none of their solutions work. I have checked Block Audio and Video Autoplay in my settings, but Fir… (funda kabanzi)
Asked by maya 1 unyaka odlule
Asked by Richardwijaya379 1 unyaka odlule
Occasionally after I have participated in a survey or used a chat window, that temporary window will continue to open each time the browser starts. These windows remain … (funda kabanzi)
Asked by let98007 1 unyaka odlule